Abadlali beBhola ekhatywayo baseMelika- amaBantwana aBantwana kunye neNzululwazi yeBhayiloji
Ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL
Wonke uMdlali weBhola ekhatywayo wase Mzantsi Afrika ufumana iBali lobuNtwana. La mabali azaliswe ngamaxesha angalibalekiyo omnandi kwaye achukumisayo. Umsebenzi wethu apha kukukuxelela ezivenkile kunye neBiogies yeNyaniso yeBhola ekhatywayo yaseMzantsi Melika.
Kutheni le nto siJolisa kuMabali eMidlalo aseMelika aseMelika?
Kwiminyaka edlulileyo, siye saqaphela ingxaki eyaziwayo ekhoyo kwiwebhu malunga namabali ebhola. Kukho umsantsa wolwazi onxulumene nemfuno yolwazi olucwangcisiweyo malunga nabathandi bebhola baseMelika.
Kwindlela yethu encinci yokufaka isandla, iqela lethu lagqiba kwelokuba liseke eli nqanaba laseMzantsi Merika ngonyaka ka-2016. Okwangoku, sibuhlungu ngesithembiso sokuhambisa amaNqaku oBantwana kunye neBiografics yeeBhola zaseMelika zaseMelika.
Ukujonga umxholo weSouth America
Ukuqala, onke amanqaku alungiselelwe malunga nabaphathi bebhola yommandla agcina ukugeleza okunengqondo kwibakala ngalinye lamabali abo. Ngamazwi alula, umxholo wethu woMzantsi Melika ukuxelela oku kulandelayo.
Okokuqala nokuphambili, sikuphathela amabali obuntwaneni babo bancinci bebhola, ukuqala ngexesha lokuzalwa kwabo kumava abo obomi abancinci.
Sikuzisa ulwazi malunga nemvelaphi yoSapho kunye nemvelaphi yabadlali abaphambili bebhola baseMelika. Oku kubandakanya ulwazi malunga nabazali babo (ootata kunye noomama).
Okwesithathu, sikuxelela imisebenzi yoBomi oBuqala ekhokelele ekuzalweni kwamakhondo eSouth American Footballers.
Ngapha koko, ibali liyaqhubeka namava abo amakhondo abo okuqala.
Ibali lethu leNdlela eya kuFame lichaza yonke incinci yeTussle South American footballers ehamba kuyo efuna ukuphumelela.
Emva koko, ibali lethu leRise to Fame likuxelela amaBali abo okuPhumelela.
Siyaqhubeka ukukuhlaziya ngeeMbali zoThando zaBathandi bebhola baseMzantsi Melika. Apha, asikhawulelanga kulwazi malunga neeNtombi zabo nabafazi babo.
Okulandelayo, ziiNqaku malunga noBomi boBantu baseMzantsi Melika bebhola
Sikwenza ukuba uqhelane namalungu osapho lwabo, izihlobo kunye nolunye usapho
Iqela lethu liqhubeka nokutyhola umvuzo wabo, ixabiso leNet kunye nendlela yokuphila.
Okokugqibela kodwa hayi kuluhlu, siza kukuzisela iinyani zeNqaku ongakaze wazi ukuba zikhona malunga nabadlali bebhola baseMelika.
Okwangoku, siluchithile udidi lwebhola laseMelika laseMelika kula macandelo alandelayo. Babandakanya;
Ufundile umsebenzi wethu, uyakuyibona loo nto LifeBogger ukholelwa kumbandela wokuvala izithuba ezikhoyo kwisiseko solwazi Amabali obuntwana kwaye Iinyani zebhayiloji. Ukubeka nje, ayisiyiyo yonke into ngokubukela umdlalo kodwa ukwazi amabali angemva kwalawo magama aphezulu kwisandi.
Silwela ukuchaneka ngelixa sisenza imisebenzi yethu yemihla ngemihla. Ngobubele Qhagamshelana nathi ukuba ujonga imiba (imi), iimpazamo okanye ukushiyeka kulo naluphi na ushicilelo lwethu malunga neLatin American Footballers.
Okokugqibela, sikubonelela ngamabali abantwana abasebuntwaneni kunye neziBalo zebhayiloji zaBadlali beBhola ekhatywayo yaseLatin America.
Johnny - Umhla oLungisiweyo: nge-25 kaSeptemba ngo-2020
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-25 kaSeptemba ngo-2020
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-13 kaSeptemba ngo-2020 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-10 kaSeptemba ngo-2020 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-3 kaSeptemba ngo-2020 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-4 kaSeptemba ngo-2020 0
IAlfredo Morelos Ibali leNqanaba lokuKhula kobantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Toon - Umhla oLungisiweyo: nge-22 kaSeptemba ngo-2020 0